Hetsika fanentanana "Fandio Tsotra": Ao Fenerivo Atsinanana | UNICEF Madagasikara
Ny fiverenana amin’ny laoniny dia atao ao anatin’ny fanajana ny fidiovana
UNICEF Madagascar/2020/Nirina Andriambololona
Ny fidiovana dia nanjary teny filamatra tao Fenoarivo Atsinanana, any amin'ny faritra atsinanan'i Madagasikara. Mavitrika tokoa ny distrika eo amin'ny fanajana ny fidiovana ankehitriny satria manomboka mitraka tsikelikely ny faritra aorian'ny COVID-19. Tsy nahitana tranga vaovao mantsy nandritra ny herinandro vitsivitsy izay.
Tsy niandry ela i Moravelona Dominique fa noraisiny ho toy ny fomba fanao ny fanasan-tanana hatramin'ny niatombohan'ny COVID-19. Hentitra mihintsy io mpivarotra io eo imason'ny mpanjifany.
Raha teny am-piandohana izy dia nanana fitaovana fanasan-tanana (DLM) miaraka amina siny mavomavo misy paompy, amin’izao fotoana izao izy dia nahazo fitaovana vaovao mba tsy hisian’ny fifampikasohana. Tsapany tokoa mantsy ny maha-zava-dehibe azy io sy ny loza ateraky ny fikitikitihana ny paompy, izay mety hiteraka fifindran’ny valan’aretina. Nanomboka teo dia tsy nampiasa ny rantsan-tànany intsony izy mba hampandehanana ny rano.
Ity fitaovana ity dia nozaraina maimaimpoana ka ny UNICEF sy ireo mpiara-miasa aminy toy ny fikambanana Miara-miarina sy ny Association Malgache de Demain no niandraikitra izany ho fanombohana ny hetsika fanentanana “Fandio Tsotra” ao Fenoarivo Atsinanana. Ity hetsika ity, izay tarihin'ny talem-paritry ny Rano, ny Fanadiovana ary ny Fidiovana, dia kasaina hatao ao anatin’ny telo volana ho avy izao, miaraka amin'ny fizarana DLM tsy misy fifampikasohana miisa 1 000.
Faly ireo olona izay misitraka izany ary miresaka momba azy io izy ireo. Mitombo ny mety ho fifindran’ny valan’aretina amin'ny fampiasana ny DLM misy paompy; izany no antony ity fandraisan’andraikitra mikasika ny fampiasana ireo fitaovana tsy misy fifampikasohana ity. « Ny fanasana tanana dia fihetsika iray manan-danja izay afaka mamonjy ain'olona mandritra ny COVID-19, indrindra ho an'ireo mpivarotra izay tsy maintsy mikirakira vola amin’ny tanana, » hoy ny fanazavan’i Dominique. Nahazo fampianarana mikasika ny fanamboarana io fitaovana vaovao io izy mba hahafahany mampita indray izany amin’ny hafa. Siny mavomavo miaraka amin’ny saron-tavoahangy fasiana ranon-tsavony fotsiny no ilaina amin’izany.
Joela Razafindrahoely, renim-pianakaviana manan-janaka roa, dia mampiasa azy io ihany koa ao an-tokantranony any Sahavola. Amin’ny maha reny mipetraka ao an-trano azy dia tena ilaina ny fahadiovan'ny tanana, ary indrindra koa izy mbola mampinono. « Mpanampy be ahy ity fitaovana ity satria satria vehivavy mpikarakara tokantrano ny tenako, indrindra aorian'ny tsena izay ataoko rehefa maraina, » hoy ny fanazavany.
Joela, 25 taona, manan-janaka iray, dia mampiasa DLM tsy misy fifampikasohana ao Fenoarivo Atsinanana.
Tena ilaina ny firaisankina ao Fenoarivo Atsinanana. « Ho fanampiana ny mpifanolo-bodirindrina aminay mba haka tahaka ity fitaovana ity dia afaka mizara saron-tavoahangy fasiana ranon-tsavony Nickel aho rehefa lany ny anay, » hoy izy, sady nomarihany ihany koa fa ny DLM tsy misy fifampikasohana dia lasa raharaham-pokonolona.
Ho fanampin'izay, ny fampianarana izay natao ho an'ny tokantrano 1 000 dia manampy ny tohi-belin’ny fiarahamonina satria azon'ny olona atao tsara ny manamboatra ilay fitaovana, ka tsy mila miandry fanomezana izy ireo.
Marihina fa ny hetsika Fandio Tsotra izay natomboka tamin'ity volana septambra ity dia mamporisika ihany koa ny fampiharana ny fomba fanao mikasika ny fidiovana aorian'ny COVID-19. Izany dia tetezamita mankany amin'ny ezaka mitohy momba ny fanentanana ny vahoaka manontolo ao amin'ny Faritra Analanjirofo, izay mifandraika amin'ny tanjona hahatratrarana ny famongorana tanteraka ny fanaovana maloto ankalamanjana. Kasaina ny hanatontosana izany amin'ity taona 2020 ity ao anatin’ny fandaharan’asa nasionaly Mada Madio.
Joela, 25 ans, mère d'un enfant, utilise le DLM sans contact à Fénérive Est
La solidarité est de mise à Fénérive Est. « Pour aider nos voisins à imiter ce dispositif, je peux partager du bouchon push-pull de savon liquide Nickel après avoir fini le nôtre » ajoute- t-elle en signalant que le DLM sans contact est devenue une affaire communautaire.
De plus, le tutoriel mis à la disposition de 1000 ménages aide à la résilience communautaire car les gens peuvent en fabriquer eux-mêmes sans attendre de don.
À noter que la campagne Fandio Tsotra lancée au cours de ce mois de septembre encourage aussi l’adoption de la bonne pratique d’hygiène post-COVID-19, soit une transition vers l’effort continu à la mobilisation de la population entière de la région Analanjirofo dans son objectif d’atteindre le statut de zéro défécation a l’air libre planifié cette année 2020 dans le Programme National Mada Madio.